वि.सं १३ श्रावण २०७५, आईतवार १२:०२
वर्षायाममा पोलेको मकै खानुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । पोलेको मकै स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि निकै स्वस्थ मानिन्छ । तर यदि तपाईंले पोलेको मकै खाएलगत्तै पानी पिउनुहुन्छ भने यो निकै हानिकारक साबित हुनसक्छ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डा. आशुतोष गौतमका अनुसार पोलेको मकै खाएलगत्तै पानी पिउँदा पेटसम्बन्धि विभिन्न समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यसले ग्याष्ट्रिकको समस्या र पेट दुख्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
डा. आशुतोषका अनुसार यस्तो गम्भीर स्थितीबाट बच्नका लागि मकै आएको कम्तीमा ४५ मिनेटपछि मात्र पानी पिउनुहोस् । यसका साथै पोलेको मकैमा कागतीको रस राखेर खानुहोस् किनभने कागतीले पाचन शक्ति बढाउने काम गर्छ र पाच प्रक्रियालाई सूचारु र प्रभावकारी बनाउने गर्छ । मनसुनको क्रममा पाचन शक्ति कमजोर हुने भएकाले हामीलाई चाँडै नै रोगले गाँज्ने गर्छ । पोलेको मकै बाहिर नै पाउने भएकाले यसलाई ताजा र तातो नै खानुपर्छ । पोलेको मकैको पौष्टिक तत्व पाउनका लागि यसलाई पोलेलगत्तै खानुहोस् । लामो समयसम्म राख्दा यसले हानिकारक ब्याक्टेरिया बढाउन सक्छ र पेट सम्बन्धि समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
पोलेको मकै खाएपछि नपिउनुहोस् पानी